Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Taas waan kaa caawin karnaa	/ Waxaad nagu soo dacweyn kartaa anaga
Haddii aad u aragto in uu iskoolka raaceynin sharciyada yaalla anaga ayaad nagu soo dacweyn kartaa. Waxa eey ahaan kartaa in aysan sameynin waxay awoodi karaan si ay u joojiyaan dhibaateynta, hadii aanad helin caawimaada aad xaqa u leedahay ama uu iskoolku uusan buuxinin xuquuqda ardayga.
Inta aanad dacwada sameyn
Markasta dhibaatadaada kala hadal macallinkaada ama maamulaha. Haddii aanad kaligaa la hadli karin waalidkaada ka codso in ay ku soo raacaan marka aad la hadleysid iskoolka. Taa haddii eey ku caawin weyso waxaad u tagi kartaa madaxa sare ee iskoolka. Waana degmada ama qofka iskoolka is kaleh hadii uu markaa yahay iskool baraayfat ah oo si gaara loo leeyahay, oo mas'uuliyadiisu tahay in uu iskoolka sharciyada raaco.
Sida ugu fudud oo aad ula xiriiri karto qofka iskoolka mas'uulka ka ah waa bogga internetka ee degmada. Badanaa wey fiicantahay in la raadiyo dacwo + boga internetka ee iskoolka si aad u hesho warbixin sax ah.
Ku dacweey kormeerayaasha iskoolka
Hadii aad la hadasho iskoolka iyo kuwa xakumaba laakiin aanad weli caawimaad helin annaga ayaa nagu soo dacweyn kartaa. Ka fakar waxa aad ka dacwoon kartaa waa in ay ahaadaan wax hore u dhacay. Ardayda ay quseysana waa in ay iskoolka joogaan si eey u suurto gasho in la baaro. Haddii adiga ama qof kale la dhibaateeyo markaa sharciga taa wuu ka duwanyahay. Taa waxaad ku dacweyn kartaa iskoolka hadii xataa aanad dhigan iskoolka.
Maxaa dhacaya marka aad dacwooto?
Marka eey dacwadda nasoo gaarto waxaan la xiriirnaa iskoolka is aan u ogaano wixii dhacay oo faahfaahsan. Adiga xittaa waan kula soo xiriireynaa hadii aan wax su'aalo ah qabno. Waxey qaadataa dacwada baaritaankeeda 4-5 bilood.
Haddii aan aragno in uu iskoolka jabiyay sharciga waxaan ka dalbeynaa in uu wax ka badelo taa. Markaa kadib waan kontarooli doonnaa in eey wax ka badeleen iyo in kale.
Ma ahaan karaa bilaa magac?
Dacwo waad sameyn kartaa adiga oo aanad sheegin qofka aad tahay, laakiin waxaan kula talinaa in uu qofka magaciisa qoro. Markaas waxaa fududaanaya in dacwaddii la baaraa iyo si aan kuula soo xiriirno haddii aan wax su'aal ah qabno.
Mararka qaar waa qasab in aan ogaanno qofka dacwada sameeyay si markaas aan wax baaritaan ah u sameyno. Haddii eey tusaalo ahaan dacwadaada tahay in aanad caawinaad helin si aad natiijadaada u gaarto, waa qasab in aan ogaanno qofka aad tahay si aan u baarno caawinaaddii aad hore u heshay.
Halakan usoo dir dacwadaada
Ku buuxso halkaan dacwada aad u direyso kormeerayaasha iskoolka
Waxaad kale oo aad noosoo diri kartaa warqad caadi ah, taa oo eey ku qorantahay dhibaatada waxa eey tahay, waxa aad u aragto qaladka uu iskoolka sameeyay iyo dacwadaada waxa ay tahay.
U dir warqada: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
Ama iimeyl u dir: skolinspektionen@skolinspektionen.se